Aware bԑkɔ so wɔ Ɔsoro? | 4Mormon (Mormonfo)
Aware bԑkɔ so wɔ Ɔsoro?
“wɔn a woannya aware afebɔɔ bԑyԑ abɔfo. Seesei, abɔfo bԑyԑ nkurɔfo a wɔawie wɔn adwuma wɔ asɔredan no mu. Nanso saa yԑn….yerenom ne yԑn kununom ase atim ama yԑn no benya anyame gyinabea akyԑn abɔfo a wɔwɔ soro no gyinabea”
–Spenser Nkyerԑkyerԑ, Kimball, kr. 51
Yesu kyerԑkyerԑԑ Aware sԑ ԑyԑ bere nyinaa ne afebɔɔ?
“Enti wɔ owusɔre no hena na ɔyԑ ne yere, nnipa ason no? Efisԑ wɔn nyinaa waree no. Yesu buae see wɔn sԑ, moafom, na monnim kyerԑwnsԑm no ne Onyankopɔn tumi no. Efisԑ wɔ owusɔre no wɔrennware na kapԑsԑ wɔde wɔn bԑma aware, mmom wɔbԑyԑ te sԑ Onyankopɔn abɔfo wɔ ɔsoro”-Mateo 22:28-30
Na Yesu buae wɔn kae sԑ Wiase yi ma ware na wɔde wɔn ma aware. Nanso wɔn a wobebu wɔn bem sԑ wɔfata sԑ wobenya wiase ne owusɔre afi awufo mu no renware, anaa mfa wɔn mma aware. Na mpo wontumi nwu bio; efisԑ wɔne abɔfo no yԑ pԑ afei wɔyԑ Onyankopɔn mma ne owusɔre mma”-Luka 20:34-36
Daapem Aware-Abusua yɛ Afebɔɔ
Previous PostDԑn na ԑbԑkyerԑ sԑ woyԑ “Onyankopɔn”?Next PostYosef Smith ɔfatae sԑ ɔkyerԑ Onyankopɔn nkurɔfo kwan?